Sidee loogu xiraa Hangouts-ka Pidgin marka shirkadaadu aysan kuu oggolaan doonin? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee loogu xiraa Hangouts-ka Pidgin marka shirkadaadu aysan kuu oggolaan doonin?
Babel | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Sida dhammaan waxyaabaha aan bartay, dhammaantood waxay ku bilaabmeen baahi. Isticmaalka Pidgin Waxaan gartay inaan ka xidhiidhi karo shaqadayda ilaa Messenger laakiin aanan ku xidhi karin Google Talk, sidaa darteed waxaan u dhaqaaqay si aan u ogaado sababta iyo sida looga hortago nasiib darradaas.
Waxa ugu horeeya ee aan ogaaday waa inaan kuxiran kari waayo fursadaha caadiga ah maxaa yeelay shirkadaydu waxay iiga wareejisaa google.talk.com server kale oo qabsada halka ay ku basaasto waxkasta oo aan qoro inta aan ku noolahay dhalanteedka inay tahay isku xir aamin ah mahadsanid SSL.
Warka wanaagsani waa in Pidgin uu gartay tan oo uu diiday inuu isku xiro, iyadoo loo tixgelinayo khayaanadan mid aan ammaan ahayn. Tan iyo markii xayndaabyadu ay boodayaan, sharciyada waa in la jebiyaa, waxaan la wadaagayaa sida tan loogu rogo saddex tallaabo oo fudud:
Furo xulashooyinka pidgin si aad ugu xirto gtalk una aad xulashooyinka horumarsan.
U beddel tabta amniga "Isticmaal SSL hore" una beddel dekedda isku xirka 443.
Waxa ugu muhiimsan: "Ku xirnaanta adeegga" ku qor cinwaanka ip halkii cinwaanka talk.google.com. Si aad u ogaato IP-ga, ka raadso adeeg khadka tooska ah nslookup oo geli talk.google.com ama nooca Gnu / Linux console nooca ping talk.google.com; habkaas waxaad ka heli doontaa ip.
Intaasi waa intaas. Haddii aad kaliya rabto inaad isku xirto, tani waa kugu filan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato waxa gadaal ka dhaca, sii wad akhriska.
Markaad rabto inaad ku xirnaato talk.google.com adeegaha ayaa xaqiijinaya isku xirnaanta sirta ah wuxuuna kuu dirayaa gmail.com, laakiin maadaama halkii aad ku xiri laheyd talk.google.com aad ku xirmi laheyd server kale, Pidgin wuxuu waligiis sii joogayaa gmail.com isagoo isku xiraya isagoon weligiis guuleysan.
Adoo badalaya dekedda isla markaana ku qasbaya isticmaalka adeegaha loo yaqaan 'talk.google.com server' (cinwaankiisa ip)) waxaan ka baxsaneynaa dib u jeedinta dhanka sirdoonka iyo sameynta xiriir sugan (aragti ahaan ugu yaraan).
Haddii aad rabto inaad ogaato magaca serverka wax basaasa, samee waxyaabaha soo socda: fur terminal oo qor
(waxaad u baahan doontaa xirmada dnsutils).
Waa inay soo baxdo wax sidan oo kale ah:
Jawaabta aan sharciyeysnayn waa adeegaha runta ah iyo wxyz server-ka ayaa ah imposter. Hada, ku qor terminal-ka nslookup wxyz waadna ogaan doontaa magaca server-ka ay shirkadaadu kuu wareejinayso (sida xaqiiqada ah magacyadeeda magacyadooda).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loogu xiraa Hangouts-ka Pidgin marka shirkadaadu aysan kuu oggolaan doonin?
Pidgin waa wax layaableh, aniga waxaan kula wada sheekaysanayaa whatsapp, google, MSN, facebook iyo jabber hal meel ah.
Cinwaanku wuxuu noqon lahaa: sida shaqada loogu lumiyo saddex tallaabo oo fudud…. Nin yahow, waxyaalahan laguma sameeyo shaqada.
Jawaab Mariano O.
Waxay kuxirantahay shaqada lol. Hagaag, waan sameeyaa oo xitaa ma aqaano inay ogaadeen iyo in kale. Haddii ay wax ii sheegaan waxaan tilmaamayaa sharci-darrada basaasnimada (ugu yaraan Mexico) waana intaas. Waan ogahay in qof kastaa sameeyo, laakiin ugu yaraan si aan caddaan ahayn. Salaan.
Ma jiraan wax uusan awoodin Pidgin-ka? : AMA
Qalfoof buluug ah dijo
Ooya? Waa hagaag, inay farxad mooyee dabcan tahay ... markaa waxaan dhihi doonaa, isbinaajka omelette ...
Ku jawaab BlueSkull
Haa, ku keydi sirta qaab sir ah iyo wax qoraal cad ah.
Ma garanayo sida Pidgin uusan u xallin dhibaatadaas halista ah weli
Pidgin la Kordhinta KWallet ee KDE, sirta sirta ah 😀
Hadday ku jirto Gnome / Xfce / LXDE kordhinta Gnome-Keyring ee Pidgin, furayaasha sirta ah waa la xaal marinayaa, sida @elav u sheegayna, KDE oo leh kordhinta KWallet sidoo kale waa la samayn karaa.
Sidee baan u xiiso ahay isku mid laakiin waxaan la yaabanahay haddii qaabkani shaqeynayo haddii aad leedahay xaqiijin laba-tallaabo ah oo firfircoon
Ku jawaab chejomolina
Anigu iskuma dayin. Maxaad isku dayi weyday oo aan noola socodsiin? 😀
Haye, Mariano O. Argentina waxaan dhihi laheyn waxaad noqon laheyd ubax "buchón", sock licker for the boss, caawiye loo shaqeeyaha, qof bilow ah oo mushaharkaaga ku siiya. WAANU QAADANAYN oo midkastaba wuxuu doono ayuu sameeyaa. Xitaa leh farriin aan dhib lahayn.
Pou: Masago qaab qaab Tamagochi ah oo loogu talagalay Android-kaaga
Muhiimadda ay leedahay haysashada Kaabasho iyo xoogaa qalab ah oo lagu fulinayo